တရုတ်၏ နောက်ကြောင်းပြန် ခြေလှမ်းများ
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ကာလကကဲ့သို့ တရုတ်ပြည်တွင် ဖိနှိပ်မှု များ ပြန်လည် ခေါင်းထောင်ထလာသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ပျက် လာနေခြင်း သည် ကမ္ဘာနှင့် အမေရိကန်ပြည်အတွက် မည်သို့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်လေ သနည်း။
တရုတ်ပြည်၏ နိုင်ငံရေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲ လာခြင်းသည် အမေရိကန်၏ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီအပေါ် မည်သို့ ရိုက်ခတ်လာမည်ကို စောင့်ကြည့်ကြရမည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းလေး ဆယ်ကျော်က အမေရိကန်သမ္မတ နစ်ဆင်နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ မော်စီတုန်း တွေ့ဆုံစဉ် ချမှတ်ခဲ့သည့် အမေရိကန်၏ တရုတ်ပြည်ပေါ်လစီသည် ယခုထက်တိုင် မပြောင်းမလဲ တည်ရှိနေ ဆဲပင် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကို တိုးမြှင့်ရေး၊ တရုတ်ပြည် ခေတ်မီရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးကို အားပေးထောက် ခံရေး စသည့် အချက်များပေါ်တွင် အမေရိကန် အစိုးရ အဆက်ဆက်က အခြေခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အကျိုးစီးပွားချင်း၊ တန်ဖိုးထားမှုချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်လာသည့် အခါမျိုး တွင်လည်း နှစ်နိုင်ငံ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက် ကာ ရှေ့ ဆက်နိုင်ခဲ့ သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲကဲ့သို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြုတ်ဖြုတ်ရန် ကြိုးပမ်း ခြင်းသည် အရာမထင်ဆိုသည်ကို သမိုင်းက သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
စစ်အေး ကာလတွင် အမေရိကန်၏ အကျပ်ကိုင်မှု၊ ထိုးနှက်မှုများကို တရုတ်က ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၈၉ ခု တိန်အန်မင် ရင်ပြင် အရေးအခင်းအထိ ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည့်အပြင် အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ပိုငွေ ပြလာနိုင်သည်။ ထိုင်ဝမ်ကို မကြာခဏ လက်နက်ရောင်းချခြင်း၊ ဒလိုင်လားမားနှင့် အမေရိကန်သမ္မတတွေ့ဆုံခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံကွဲပြားခြင်းတို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ မကြာခဏဆိုသလို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ ရသည်။
သမ္မတနစ်ဆင်မှသည် အိုဘားမားတိုင်အောင် အမေရိကန် သမ္မတ ရှစ်ဦးသည် တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ဇာတ်ညွှန်း အတူတူပင်ဖြစ် သည်။ သို့စဉ်တိုင် အသစ်တက်လာမည့် သမ္မတ လက်ထက်တွင်မူ တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးသည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားလေ မည်လားဟု အမေးထုတ်မှုများရှိ နေသည်။ ယင်းသို့ ပြောင်းလဲစေ မည့် အချက်မှာ တရုတ်ပြည်တွင် ဖိနှိပ်မှုများ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် ထရန့်က ထိုင်ဝမ်ကို မျက်စပစ် လိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်အပေါ် အမေရိကန် အစိုးရအဆက်ဆက်ရှုမြင်မှုမှာ တစ်ညီတည်းဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စည်ပင်လာသည့် တရုတ် ပြည် သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ကောင်းမွန်စေမည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတ အဆက်ဆက်က ယုံကြည် ထားသည်။ လူဦးရေ သန်းတစ် ထောင်ကျော်ရှိသည့် တိုင်းပြည် ကြီးသည် ဆင်းရဲနေပါက နိုင်ငံ တိုင်းအတွက် ဆိုးဝါးသော အကျိုး ဆက်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု လက် ခံထားကြသည်။ သမ္မတ အိုဘား မားက ''ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းလင်း လင်း ပြောထားတာ ရှိပါ တယ်။ တိုး တက်စည်ပင်တဲ့ တရုတ်ပြည်ထက် အားနည်းတဲ့ တရုတ်ပြည်ဟာ ပို ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ'' ဟု ပြောခဲ့ ဖူးသည်။
တိုးတက်စည်ပင်သော တရုတ် ပြည်သည် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ အလိုအ လျောက် ရောက်လာလိမ့်မည် ဆို သော မှတ်ယူချက်ဖြင့် သမ္မတ အ ဆက်ဆက်က အဆိုပါ ပေါ်လစီ ကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့စဉ် တိုင် တရုတ်ပြည်သည် မည်သည့် ပုံစံ၊ မည်သည့် လားရာဖြင့် တိုး တက်လာသည်ကို ဆန်းစစ်ရန် လို အပ်မည်ဟု နိုင်ငံရေး သုံးသပ်သူ များက ထောက်ပြ လာသည်။
နှစ်စဉ် တရုတ်လူမျိုး အများ အပြားသည် ဥရောပသို့ အပန်း ဖြေခရီးထွက်ကြသည်။ ကာလီဖိုး နီးယားတွင် ပညာသင်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်၏ ပြင်ပတွင် အင်တာ နက်အသုံးပြုကြသည်။ ယင်းသို့ဖြင့် တရုတ်တို့သည် ပြင်ပနိုင်ငံများ တွင် ၄င်းတို့ သိရှိခံစားရသည့် လွတ်လပ်မှုမျိုးကို ပြည်တွင်း၌ အစိုးရက ဖော်ဆောင်ပေးရန် ဖိ အားပေးတောင်းဆိုလာလိမ့်မည် ဟု ယူဆဖွယ်ရာ ရှိသည်။
တရုတ်ပြည်သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုချမ်းသာ ကြွယ်ဝ လာသည်မှာ မငြင်းနိုင်သော အ ချက်ဖြစ်သည်။ သို့စဉ်တိုင် ထိုချမ်း သာကြွယ်ဝမှုနှင့် အတူပါမလာ သော လွတ်လပ်ခွင့်ကို သတိပြု သင့်သည်။ တရုတ်ပြည်၏ အင် တာနက်ကို အတားအဆီးအကာ အရံများဖြင့် ဆင်ဆာဖြတ်ရုံမျှမက တရုတ်ပြည်၏ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကို ကမ္ဘာနှင့် သီးခြားဖြစ် စေရန် ပိုင်းခြားလာသည် ကို တွေ့ နေ ရသည်။ ကမ္ဘာတွင် အသုံးတွင် ကျယ်နေသည့် ဂူဂဲလ်အစား တရုတ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် 'ဘိုင်ဒူး' (Baidu) သည် လည်းကောင်း၊ တွစ် တာအစား 'ဝီချက်' (We Chat) သည် လည်းကောင်း ဝင်ရောက် လာသည်။ ထိုကုမ္ပဏီများသည် တရုတ် အစိုးရ ဆင်ဆာ၏ တင်း ကြပ်သည့် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် လုပ်ကိုင်ရသည်။
ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကို ရှောင်ကွင်းနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်အင် တာနက် ကွန်ရက်များကို ဆယ်စု နှစ်ပေါင်းများစွာ တရုတ်အစိုးရက လွှတ်ပေးထားခဲ့သည်။ ယခုအခါ ထိုကွန်ရက်များကို အစိုးရက တား ဆီးနှိပ်ကွပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည် ပြင်ပရှိ ပင်လယ်ရပ် ခြား တရုတ်အမျိုးသား အချို့နှင့် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်ပြည်၏ ဆက်သွယ်ရေး အ တားအဆီးများ၏ ယိုပေါက်များ ကို ရှာဖွေလျက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ သည်။ ထိုယိုပေါက်များကို တရုတ် အစိုးရက လိုက်လံရှာဖွေလျက်၊ ပိတ်ဆို့လျက်ရှိသည်။ ယိုပေါက် များကို လိုက်ပိတ်နေသည့် တစ်ချိန် တည်းတွင် အခြားနေရာများတွင် ယိုပေါက်များထပ်မံ ပေါ်ပေါက် လာသည်။ ကာလီဖိုးနီးယား အခြေ ပြု အင်တာနက် ကုမ္ပဏီမှ အရာရှိ တစ်ဦးက ''ကြောင်နဲ့ ကြွက်လိုပဲ ဘတစ်ပြန်ကျားတစ်ပြန်ဖြစ်နေတာ။ တရုတ်ဆင်ဆာကို ကျော် လွှားနိုင်တဲ့ ယိုပေါက်တစ်ခုတွေ့လို့ ဝိုင်းသုံးနေကြပြီ ဆိုရင် စောင့်ကြည့် နေတဲ့ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက မကြာခင်သိတာပဲ။ အဲဒီ ယိုပေါက် ပိတ်လိုက်ရင် နောက်ယိုပေါက်တွေ ကို ရှာသုံးကြပြန်တယ်။ ဘယ် တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲပဲ'' ဟု ပြောသည်။
တရုတ် ပုံနှိပ်နှင့် လွှင့်ထုတ် မီဒီယာများသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကဆိုလျှင် အစိုးရကို ဝေ ဖန်ရေးသားနိုင်သည်။ လွတ်လပ် သော မီဒီယာသည် ပြည်သူ၏ ခံ စားချက်ကို ထွက်ပေါက်ပေးသလို အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း အားနည်း ချက်များကို မီဒီယာမှ စောစီးစွာ သိရှိနိုင်သည်ဟု ကွန်မြူနစ်ပါတီ က သဘောထားခဲ့သည်။ ယခုအ ခါတွင် မီဒီယာ အားလုံးကို အစိုးရ က တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိန်းချုပ် ထားသည်။
အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြောဆို မှုများကို ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း၊ ပါတီ ၏ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးထိပ် ပန်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီကျင့် ပင်နှင့် ပါတီထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် များ၏ ပြောဆိုမှုတို့ကို မီဒီယာများ က မကြာခဏ ဆိုသလို ဖော်ပြနေ သည်။ ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းများ ကို ယခုနှစ်တွင် အစိုးရက ပိတ် ပင်လိုက်သည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို နှိပ် ကွပ်သည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီက တရားဝင်ဟု သတ်မှတ်ပေးထား သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တာအို၊ အစ္စ လာမ်၊ ကက်သလစ်နှင့် ပရိုတက်စ် တင့်တို့ကိုသာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြု သည်။ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ထားသော ဘုံကျောင်း၊ ဘုရား ကျောင်းနှင့် ဗလီတို့တွင်သာ ဘာ သာရေးစုရုံးမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ အ လုပ်သမား သမဂ္ဂများကိုလည်း ကွန်မြူနစ် ပါတီက ကြိုးကိုင်ထား သည်။ အန်ဂျီအိုများသည်လည်း အလားတူ ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်း ပိုမိုပြင်း ထန်လာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို အကြောင်းပြကာ ဘုရားရှိ ခိုးကျောင်းများ ဖြိုဖျက်ခံရသည်။ လူ့အခွင့်အရေးသမားများနှင့် ရှေ့ နေများ ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံ နေရသည်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အ ရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး တက် ကြွ လှုပ်ရှားသူများလည်း ထောင် နန်းစံရသည်။
ပြည်တွင်းတွင် ဖိနှိပ်နေသည် ကို အားမရသေးဘဲ တရုတ်ပြည် ပြင်ပအထိ ဖိနှိပ်ကန့်သတ်မှုကို ဆန့်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းလာမှုများ ကိုလည်းတွေ့နေရသည်။ နော်ဝေ နိုဘယ်လ်ဆု ရွေးချယ်ရေး ကော်မ တီက စာရေးဆရာ လျူရှောင်ဘို ကို နိုဘယ်လ်ဆု ပေးသည့် အတွက် နော်ဝေ မှ ဆဲလ်မွန်ငါးတင်သွင်းမှု ကို သပိတ်မှောက်သည်။ ပြည်ပ သို့ ထွက်ပြေးသွားသော အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူများ၏ ဆွေမျိုးသား ချင်းများကို အနှောင့်အယှက်ပေး ခြင်း၊ ဖမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်လာ သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီ များကိုလည်း တရုတ်ပြည် ပြင်ပ တွင် တရုတ်၏ ဆင်ဆာစည်းကမ်း အတိုင်းလိုက်နာရန် ဖိအားပေးခံ ရသည်။ တရုတ်ပြည် ပြင်ပရှိ ပရိ သတ်များအတွက် ဖော်ပြထား သော အချက်အလက်အချို့တို့ သည် တရုတ်ပြည်အပေါ် ဝေဖန် ရေးသားထားသဖြင့် LinkedIn ကုမ္ပဏီက ဖျက်ပေးခဲ့ရဖူးသည်။ ကုမ္ပဏီကလည်း ၄င်းတရုတ်ပြည် အတွင်း ဆောင်ရွက်နေသော လုပ် ငန်းများကို မထိခိုက်စေရန် ဖိအား ပေးမှုကို အလျှော့ပေးခဲ့ရသည်။
တရုတ်မြို့ကြီးများတွင် ပုံမှန်လှုပ်ရှား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား နေသည်ကို တွေ့မြင်ရသော်လည်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေမှာ ဆိုးရွား နေ သည်။ တရုတ်ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ 'ကားလ် မင်ဇနာ' (Carl Minzner) က ''တရုတ်ပြည် မှာ တိန်အန်မင်ရင်ပြင် နောက် ပိုင်း အကြီးမားဆုံး နိုင်ငံရေး ဖြုတ် ထုတ်သတ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်'' ဟု ရေးသားသည်။ တရုတ်ပြည် တွင် အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင် ရွက်နေသော လာဘ်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုသည်မှာ အုပ်စုမတူသူ များကို ဖြုတ်ချရာတွင် အသုံးပြု နေသော နည်းလမ်းတစ်ခု သာ ဖြစ် သည် ဟု ဆိုသည်။
မကြာသေးမီက နိုင်ငံခြားသား ဆန့်ကျင်ရေး ဗီဒီယို တစ်ခုကို တရုတ်အစိုးရက ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အနုပညာမပါသော အတုံးအတစ် လိုက် ဝါဒဖြန့်ချိမှု ဖြစ်သည်။ ဗီဒီ ယိုမှာ ''အန္တရာယ် မကင်းသော မေတ္တာ' (Dangerous Love) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တရုတ် အမျိုး သမီးများ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မေတ္တာမမျှကြရန် သတိပေးထား သော ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ တရုတ် အစိုးရ ကျောင်းများတွင် 'သူလျှိုကို ရှာဖွေကြ' (Spot the Spy) ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဗီဒီယိုဂိမ်းကို ဝေငှပေးနေသည်။ ကလေးများ အ တွင်း အဖျက်သမားကို သတိထား ရန် လှုံ့ဆော်သော ကစားနည်းဖြစ် သည်။ တရုတ်တို့သည် အ ကြောက်လွန်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အချို့ကဆိုသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ''ရှီကျင့်ပင်ဟာ အသည်း ငယ်တဲ့လူပဲ။ အဲဒီတော့ သူ့ကို အင်အားကြီးမားတဲ့လူလို့ မြင်စေ ချင်တော့ ဟန်ဆောင်ရတာပေါ့'' ဟု ဆိုသည်။ သူ့ဖခင် 'ရှီကျောက် ရန်' သည် မော်စီတုန်းနှင့် လက်တွဲ လျက် တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ့ဖခင်ကဲ့သို့ အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းပြ လိုသည်။
တရုတ် တက္ကသိုလ်နှင့် အစိုးရ ဌာနများတွင် နိုင်ငံခြား ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်များ မသုံးဘဲ ပြည်တွင်း ဖြစ် ဆော့ဝဲများကိုသာ အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းမှုများလည်း ရှိသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှ စလျက် အက်ပဲလ် ကုမ္ပဏီ၏ iTune နှင့် iBook ဝန်ဆောင်မှုတို့ ကို အသုံးမပြုရန် ပိတ်ပင်လိုက် သည်။ ၁၃ နှစ် အတွင်း အက်ပဲလ် ကုမ္ပဏီ ပထမဆုံးအကြိမ် အ ရောင်းကျခြင်း၏ အကြောင်းရင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ တရုတ်ပြည် တွင် အရောင်းကျခြင်းကြောင့် ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။ အက်ပဲလ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ပင်ခြင်း သည် စီးပွားရေးအကြောင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် လုပ်ကိုင်နေ သော နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတစ်ဝက် ကျော်သည် အရောင်း အဝယ်ကျ ဆင်းနေသည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ များကို ယခင်ကကဲ့သို့ တရုတ်တို့ က လိုလားခြင်း မရှိတော့ပေ။ မိမိ ခြေထောက်ပေါ်တွင် ရပ်နိုင်နေပြီ ဟု တရုတ်တို့က ယူဆနေ သည်။
တရုတ်သည် စစ်အေးကာလ က ကဲ့သို့ပင် အမေရိကန် စစ်ရေး တစ္ဆေ အခြောက်ခံနေရသည်။ တရုတ်ပြည် တိုးတက်ထွန်းကား လာမည်ကို အမေရိကန် မလိုလား ဆိုသည့် အယူအဆသည် တရုတ် ထံတွင် အရိုးစွဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအရိုးစွဲ အယူအဆသည် အမေရိ ကန်နှင့်တကွ ပြင်ပနိုင်ငံများကို ရန်လိုသော အပြုအမူ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် အမေရိကန် လေတပ် ၊ရေတပ် တို့ နှင့် ထိကပါးရိကပါး ရင်ဆိုင်မှုများ သည် အမေရိကန်အပေါ် တရုတ် ၏ သံသယစိတ်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေ သည်။ ထိုရင်ဆိုင်မှုများမှ တစ်ဆင့် လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခြင်း မဖြစ်စေရန် တရုတ် စစ်တပ် နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခြင်း၊ ပူးတွဲလေ့ကျင့်ခြင်း တို့ဖြင့် အမေရိကန် ရေတပ် ဦး ဆောင်သော စစ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ များက ဆောင်ရွက်နေသည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်သည် တရုတ်အတွက် ဟန်ရေးပြရန် စစ် ရေးပြကွင်းဖြစ်နေသည်။ သို့စဉ် တိုင် ထိုဟန်ရေးပြမှု သည် နုတ်မရ အောင်ကျွံထွက်သွားပါက အမှိုက် ကစ ပြာသာဒ်မီးလောင် ဖြစ်လာနိုင် သည်။ အမေရိကန် အဖို့လည်း ကျူးဘား ဒုံးပျံအရေးခင်းကဲ့သို့ ခြေလွန် လက်လွန်မဖြစ်ရန် သတိ ထားရပေမည်။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တွေ့လျှင် အမေရိကန်က သိက္ခာ ထိန်းသည့်အနေဖြင့် အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်လျှင် ဆိုးရွားသော အကျိုး ဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။
တရုတ်၏ စီးပွားရေးသည် အံ့မခန်းတိုးတက်လာပြီး ကြွယ်ဝလာသည့် ဓနအင်အားကို အသုံးပြုလျက် နိုင်ငံငယ်များကို စည်းရုံး လာ နိုင်သည်ကို အကြောင်းပြုလျက် အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံကြီးများကို တရုတ်က စိန်ခေါ်ရန် ကြိုးစားလာခြင်း လည်း ဖြစ်သည်။
ကြီးပွားတိုးတက်လာပါက တရုတ်သည် လစ်ဘရယ် ဒီမိုက ရေစီလမ်းကြောင်းကို လိုက်လာ မည်ဟု ယူဆချက်သည် မှန်ပါ၏ လောဟု အမေးထုတ်စရာ ဖြစ်လာ သည်။ တရုတ်သည် ယခု အတိုင်း လွှတ်ထားပါက ထင်တိုင်းကြဲလာ မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိ ကန် သမ္မတသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံ ထားရသူ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ထိုင် ဝမ် သမ္မတနှင့် တယ်လီဖုန်းပြော လျက် အောင်မြင်မှုတို့ဖြင့် စိတ်ကြီး ဝင်နေသော တရုတ်ကို လှုပ်နှိုး လိုက်သည်။ ထိုင်ဝမ်နှင့် အမေရိ ကန်က သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ရပ် ဆိုင်းလိုက်သည့် အချိန်မှ ယခုအ ချိန်အထိ အမေရိကန်သမ္မတနှင့် ထိုင်ဝမ် ခေါင်းဆောင်တို့ စကား ပြောဆိုခြင်းသည် ပထမဆုံး အ ကြိမ် ဖြစ်သည်။
''တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှု မပြေလည်ဘူးဆိုရင် တရုတ်ပြည်တစ်ပြည်တည်းရှိတယ် ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို အမေရိကန် အနေနဲ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးဖို့ အကြောင်း မရှိဘူး'' ဟု ထရန့်က တုံးတိပင်ပြောချလိုက်သည်။
ထိုကဲ့သို့ တယ်လီဖုန်း ပြော ဆိုခြင်းသည် တရုတ်ကို ကြီးမားစွာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်စေသည်။ တရုတ် က ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပြော ဆို သည်။ ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်ပြည် ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည် ဆိုသော အချက်ကို တရုတ်နှင့် အမေရိကန် သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်စတင်သည့် ၁၉၇၂ ခု က တည်းက အမေရိကန်က အသိအ မှတ်ပြုပေးခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြော ခွင့်ရသူ က ''ထိုင်ဝမ် ကိစ္စ ရဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်မှုကို အမေရိကန် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် အသိအမှတ် ပြု ဖို့လိုတယ်။ အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေးကို မထိပါးစေဖို့၊ မပျက်စီးစေဖို့ ထိုင်ဝမ် ကိစ္စကို အ မြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပါ တယ်။ တရုတ်တစ်ပြည်တည်း ပေါ်လစီ ဟာ အမေရိကန်-တရုတ် ဆက်ဆံရေးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ပြော သည်။
ဂျီနီဗာတွင် အစည်းအဝေး တက်နေသော တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယီအား သတင်း ထောက်များက မေးမြန်းရာတွင် ၄င်းက ''ကျွန်တော် ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူ ပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ပြည်တစ်ပြည် တည်းပေါ်လစီကို ထိပါးမယ် ဆိုရင် ကျောက်တုံးမပြီး ကိုယ့်ခြေထောက် ပေါ်လွှတ်ချတာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ် လိမ့်မယ်'' ဟု ရှင်းလင်းဖြေကြား သည်။
ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာ သော တင်းမာမှုကို ဖြေသိမ့်သော အားဖြင့် ထရန့်သည် တရုတ်တို့ နှင့် အထူးရင်းနှီးသော အိုင်ဝိုဝါ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တယ်ရီဘရန့် စတက်ကို တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာ အ မေရိကန် သံအမတ်အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်သည်။ တယ်ရီဘရန့် စတက် အား တရုတ်တို့က 'တရုတ်ပြည်သူ တို့ မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး' ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ထရန့်သည် တရုတ်ပြည်နှင့် ပတ်သက်လျှင် မီးစတစ်ဖက် ရေ မှုတ်တစ်ဖက်လုပ်တတ်သူအဖြစ် နိုင်ငံ ရေးလေ့လာသူများက သုံးသပ် သည်။
''တရုတ်က ကျွန်တော့်ကို ညွှန်ကြားတာမျိုးမလိုချင်ဘူး။ ကျွန် တော့်ကို ထိုင်ဝမ် သမ္မတက ဖုန်း ခေါ်တယ်။ တစ်ဖက်က ခေါ်တာ ကို လက်ခံမပြောဘူးဆိုရင် ရိုင်းရာ ကျမှာပေါ့။ တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ စကားပြောလို့လည်း ကောင်းပါ တယ်။ ဘာကြောင့် တခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက ဖုန်းမပြောရဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကို ညွှန်ကြားနိုင်တာ လဲ''ဟု ထရန့်က ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရာတွင် သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ''တရုတ်က ကျွန်တော်တို့ကို ဒုက္ခပေးနေတာပဲ။ နယ်စပ်မှာ ကျွန်တော်တို့က အခွန် မကောက်ဘူး။ သူတို့က အခွန် အများကြီး ကောက်တယ်။ တောင် တရုတ်ပင်လယ်မှာ ခံတပ်ကြီး ဆောက်ထား တယ်။ မြောက်ကိုရီး ယား ကိစ္စမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကို မကူညီဘူး။ မြောက်ကိုရီးယား လက်ထဲမှာ အနုမြူလက်နက် ရှိ တယ်။ ဒါကို တရုတ်က မကူညီ ဘူး'' ဟု ထရန့်က ပြောသည်။
အမေရိကန်သည် တရုတ်၏ ဖိအားပေးမှု၊ ကန့်သတ်မှုတို့ကို လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ အ မေရိကန်ကသာလျှင် ညွှန်ကြား ချက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သတိ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေ ရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီတွင် မထိရဲ မကိုင်ရဲဖြစ်သည့်ကိစ္စ မရှိ ကြောင်းကိုလည်း ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထရန့်၏ ရွှေ့ကွက်သည် တရုတ်ကို အကြပ်ရိုက်သွားစေ သည်။ အမေရိကန် သမ္မတသစ် သည် ယခင် သမ္မတများကဲ့သို့ ထို နည်းလည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု တရုတ်က မျှော်လင့်ထားပုံ ရသည်။ ထရန့် လုပ်ရပ်များသည် အရှေ့နှင့် အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသကို မရေမရာဖြစ်စေလိမ့်မည် ဟု လေ့လာသူများက ဟောကိန်း ထုတ်ထားကြသည်။
ဘေဂျင်းမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ လေ့လာရေး တက္ကသိုလ်မှ ဌာန မှူး လီယောင်ဟီးက ''ထရန့်က သမ္မတရာထူး မယူခင် အားစမ်းတဲ့ သဘောပါ။ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ဟာ ဒီလိုပါပဲ။ ထိုင်ဝမ် ကိစ္စဟာ တခြားကိစ္စတွေ နဲ့ လုံးဝမတူဘူး။ ထိုင်ဝမ်နဲ့ ပတ် သက်လို့ တရုတ်က ဘယ်တော့မှ အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ထရန့် ဟာ ဒီပြဿနာရဲ့ အတိမ်အနက် ကို နားလည်ဟန်မတူဘူး။ ဒါပေ မယ့် မကြာခင် သူနားလည် လာ မှာပါ''ဟု ပြောသည်။
၄င်းကပင် ဆက်လက်၍ ''တရုတ်တစ်ပြည်တည်း ပေါ်လစီ ကို ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် အမေ ရိကန် တရုတ် ဆက်ဆံရေး အ ခြေခံအုတ်မြစ် သွက်သွက်ခါသွား လိမ့်မယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင် တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင် မရဘူး''ဟု ဆိုပြန်သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အာဘော်ဖြစ်သော ဂလိုဘယ်တိုင်း က ထရန့်သည် သံတမန်ရေး တွင် မသိနားမလည်သော ကလေးငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်နေကြောင်း၊ တရုတ်တစ်ပြည်တည်း ပေါ်လစီ ကို ငွေဖြင့်ပေးဝယ်မရ ဆိုသည်ကို ထရန့် မသိကြောင်း၊ သူ၏ အ တွေ့အကြုံ ချို့တဲ့မှုကြောင့် ဝန်းရံ နေသည့် တယူသန်သမားများ၏ ဆွဲဆောင်ရာသို့ ပါသွားမည့် သူ ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ့ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင် ဆိုင်ရန် တရုတ်က သန္နိဋ္ဌာန်ချ ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပွဲ၏ လှိုင်း တံပိုးအနိမ့်အမြင့်တွင် လိုက်ပါနိုင် ရန် ခါးဝတ်ကို မြဲမြဲဝတ်ထားကြ ရန်လိုကြောင်း စသဖြင့် ရေးသား ထားသည်။
သို့သော် ထရန့်သည် တရုတ် တစ်ပြည်တည်း ပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေခြင်း မ ဟုတ်ဘဲ ထိုပေါ်လစီကို တို့ကာထိ ကာ လုပ်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်၏ အကျိုးစီးပွား ဖော်ဆောင်ရန် ကြံ စည်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ စီးပွား ရေးသမားပီပီ အတက်အကျကို ကြည့်ကာ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်း ရေးအတွက် ကစားသွားရန်သာ ရည်ရွယ်ဟန်တူသည်။
တရုတ်၏ နောက်ကြောင်းပြန် ခြေလှမ်းများသည် ထရန့်၏ ကစား ကွက်များကြောင့် တုံ့ဆိုင်းသွား လေမည်လား၊ သို့မဟုတ် ခြေ လှမ်း ပိုသွက်လာမည်လား စောင့်ကြည့် ရန်သာ ရှိတော့သည်။
Ref: 1.China Great Leaps Backward.
2. China ‘seriously concerned’ after Trump questions Taiwan policy.
Monday2January 2017, 9:34 am
ဒီလိုဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေကို အများကို share နိုင်အောင် စီစဉ်ထားရှိသင့်တယ်။